Global Voices teny Malagasy » Mifindra ao amin’ny WeChat Ny Mpiserasera Shinoa (sy ny Kabary Politika) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Janoary 2014 5:45 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Shina, Fanarahamaso, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Warning: Illegal string offset 'caption' in /var/www/sites/globalvoices/mg/wp-includes/media.php on line 1698
Herinandro vitsivitsy lasa izay ny mpikaroka momba ny fahalalahan'ny aterineto no nanontany ahy: Inona moa izany no tena fivoarana azo tsapain-tanana tamin'ny aterineto shinoa tamin'ny 2013? Ny valiny avy amiko: Ny fisandratan'ny WeChat amin'ny mahasehatry ny fifandraisana sy fitaovam-piseraseran'ny fiaraha-monina azy. Niresaka tamin'ny mpampianatra anjerimanontolo sy ny mpiasan'ny fampitam-baovao tao Hong Kong sy Shina Tanibe nahatsapa izany ihany koa izahay.
Tao amin'ny fiaraha-midinika iray tamin'ny Desambra 2013 mitondra ny lohateny hoe “Ahoana ny fomba hanatsaran'ny Governemanta ny fitantanam-panjakana amin'ny alalan'ny serasera tsara kokoa ” tao amin'ny Oniversite Fudan, iray amin'ny tsoa-kevitra ny hoe: nisolo ny Weibo amin'ny mahasehatra lehibe indrindra famoahan-kevitra azy ao Shina Tanibe ny WeChat.
Araka ny tsikaritry fanadihadiana nataon'ny mpanatrika nivoaka tao amin'ny fiaraha-midinika, ny aterineto no fitaovam-piseraserana faharoa malaza indrindra eo amin'ny olom-pirenena — ny fahitalavitra moa no mbola mitazona ny laharana faharoa. Amin'ny ankapobeny ny Shinoa mpiserasera ao amin'ny Tanibe dia mandany 2,92 ora amin'ny aterineto. Ny fitaovana an-tserasera telo malaza indrindra dia ny fikarajiana (chat), ny tranonkalam-baovao, ary ny mili-pitadiavana. Ny antony voalohany manetsika ny mpisera dia “mitady vaovao sy fijery tsy ho hita amin'ny fahitalavitra sy ny radio”; “mahazo vaovao lalindalina kokoa”; ary “mikojakoja ny tontolom-piarahamonina manodidina ny tena”.
Nanasongadina ny talen'ny Sampan-draharahan'ny Fanaraha-maso ny Hevi-bahoaka ao amin'ny Gazetim-bahoaka [People's Daily] Zhu Huaxin （祝華新）fa, raha nahomby tamin'ny fifehezana ny Weibo ny solovavan'ny governemanta sy ny manampahefana, dia nosoloin'ny WeChat ny toeran'ny Weibo amin'ny maha-sehatra lehibe indrindra amin'ny fivoahan’ ny hevi-bahoaka azy. Nampitandrina izy ny amin'izay mety mbola hisian'ny fampanginana ny hevitra mivoaka amin'ny sehatry ny vahoaka tahaka ny Weibo, milaza fa “rehefa miforona amin'ny fifampiresahana manokana tahaka ny WeChat ny hevi-bahoaka, dia tsy ho hita ankarihary ny tsy fahafaliana ara-tsosialy.”
Ny Antotanisa farany tao amin'ny Tecent no nampiseho fa ny WeChat dia manana mpisera 600 tapitrisa tamin'ny Oktobra 2013 , ary mavitrika ny atsasak'ireo. Tamin'ny Febroary 2013, ny mpisoratra anarana tao amin'ny Sina Weibo dia manodidina ny 536 tapitrisa , saingy latsaky ny 50 tapitrisa ny mpisera mavitrika.
Ny mampalaza ny WeChat dia noho izy mifandraika amin'ny filàn'ny olona hifandray sy ny firangorangoany amin'ny maha-mpanjifa azy . Maro dia maro ny hidim-pitazonana resaka manokana ao izay miainga amin'ny karajian'olon-droa, vondrona miafina, vondrona misokatra, seha-bahoaka izay ahafahan'ny olona misoratra anarana hanjohy ny vaovao avoakan'ny namana. Ny WeChat ihany koa dia manolotra rafi-pandoavam-bola izay mampifandray ny mpiserasera ao aminy amin'ny kaontiny ao amin'ny banky ka hatramin'ny fampihatra amin'ny karazana ty sy nday rehetra na amin'ny aterineto na andavanandro.
Na dia malaza ho manao fitsikilovana  aza i WeChat, dia maro ny mpikatroka Shinoa no mampiasa azy ho fitaovam-pifandraisana.
Vao haingana ny Radio Free Asia no nitafatafa  tamin'i Wang Zhang, izay mpanorina ny fiaraha-midinika antserasera iray momba ny Fikabarian'ny [firesahan'ny] Fahefana Shinoa, hilaza ny fomba fanapenam-bava ao amin'ny Weibo sy WeChat. Navoitran'i Wang fa tsindraindray ny WeChat no mamafa lahatsoratra, raha mazoto mitsikilo sy mamafa lahatsoratra maro kosa ny mpanao sivana ao amin'ny Weibo, izay mahatonga fiforetana eo amin'ny samy mpiserasera. Ho an'ny maro, ny Weibo dia lasa akon'ny teny tarigetram-pitiavan-tanindrazana ofisialy  tahaka “Rehefa Tsy Eo ny Tanindrazana, Dia Tsy Misy Dikany Ianao” na lasa fitaovm-pifandraisan'ny filoha Shinoa Xi Jinping miresaka sakafo toy ny mofo  amin'ny olona.
Na izany aza, fantatr'i Wang ihany koa fa mety tsy ho tonga any amin'ny andefasana azy ny hafatra mety hanohintohina ao amin'ny WeChat. Ny mpisera WeChat antsoina hoe Hua Chunhui dia nitatitra tao amin'ny Twitter fa efa nanangana rafitra “fandazàna” ny “votoaty tsy ara-dalàna” izay efa nahitany ny fanjavonana vaovao ao amin'ny randran-dresaky ny vondrona misy azy ity Sehatra WeChat ity.
Nilaza tamin'ny Global Voices ny mpisolovavan'ny zon'olombelona iray fa na dia fantatry ny tontolon'ny mpikatroka ho misy fanaraha-maso aza ny WeChat, dia mbola izy no sehatra tsara kokoa ho amin'ny karazana asa toy ny fananganana [tontolom-p]fiarahamonina ohatra. Ny hidim-pitazonana resaka manokana ao dia ahafahana manaisotra ireo 50 cents [mpaneho hevitra an-tserasera karamain'ny governemanta] sy ireo mpiditra an-tsokosoka izay tsy manana tanjona afa-tsy hanapaka fifandraisana.
Niteny tamin'ny Radio Free Asia i Wang Zhang fa tamin'ny adim-potokevitra  izay efa nandeha hatramin'ny volana Aogositra 2013 sy ny fanaovana ho heloka bevava ny “fampielezan-tsaho” tamin'ny Septambra, na ny hevitra avoakan'ireo mpitarika liberaly na avy amin'ny mpiserasera tsotra dia niendaka tao amin'ny sehatra ho an'ny daholoben'ny Weibo ary nifindra ho any amin'ny WeChat na ny sehatra tsy hitam-bahoaka hafa. Koa satria moa manana vaika kokoa amin'ny fiterahan'ny hevitry ny olona ny WeChat, dia manahy i Wang fa hifintina ny fahafahana ao amin'ny WeChat.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/03/56428/
 Ahoana ny fomba hanatsaran'ny Governemanta ny fitantanam-panjakana amin'ny alalan'ny serasera tsara kokoa: http://news.sina.com.cn/o/2013-12-24/132129068708.shtml
 mpisera 600 tapitrisa tamin'ny Oktobra 2013: http://it.sohu.com/20131023/n388776543.shtml
 536 tapitrisa: http://www.bnext.com.tw/article/view/id/29587
 hifandray sy ny firangorangoany amin'ny maha-mpanjifa azy: http://punnode.com/archives/8679
 malaza ho manao fitsikilovana: http://chinadigitaltimes.net/2013/08/beware-the-wechat-spy/
 teny tarigetram-pitiavan-tanindrazana ofisialy: https://globalvoicesonline.org/2013/12/17/official-chinese-patriotism-without-motherland-you-are-nothing/
 Xi Jinping miresaka sakafo toy ny mofo: http://www.chinasmack.com/2013/pictures/president-xi-jinping-eats-steamed-buns-with-the-common-people.html